Sic Bo - ဤဂိမ်းကိုအခမဲ့သို့မဟုတ်အမှန်တကယ်ငွေဖြင့်ကစားပါ - CasinoAdvisor.eu
ဖြစ်နိုင်ခြေအများစုကိုမသိရှိသော်လည်း sic bo ကို dai siu သို့မဟုတ် tai sai ဟုလည်းခေါ်သည်။ ဆစ်ဘိုသည်အရှေ့တောင်အာရှမှဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပြီးယခုတွင်ကျယ်ပြန့်စွာဖြင့်ကမ်းလှမ်းထားသည် အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ။ မူလကဆစ်ဘိုအား ၂၀၀၀ ရာစုအစောပိုင်းတွင်ပြောင်းရွှေ့လာသူများမှအမေရိကသို့ယူဆောင်လာခဲ့ပြီးထိုဂိမ်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဥရောပသို့ရောက်လာသည်။ လောင်းကစားရုံဂိမ်း sic bo ဖြင့်မည်သည့်ပေါင်းစပ်မှုသည်အန်စာတုံး (၃) ခုနှင့်လှိမ့်မည်ကိုသင်ခန့်မှန်းသည်။ ဆစ်ဘိုသည်သင်ယူရန်ခက်ခဲသောလောင်းကစားရုံဂိမ်းတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်းကစားပွဲ၏ရွေးချယ်မှုများစွာနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ဂိမ်းစားပွဲကကြောက်စရာကောင်းသည်။ ဒီဆောင်းပါးမှာကစားပွဲကိုအချိန်မရွေးသင်နိုင်အောင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာပါမယ်။ ထို့အပြင်သင် sic bo ကိုအခမဲ့ရယူနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြည့်ပါကအနည်းငယ်ပိုမိုရှင်းလင်းလာသည်။ ဒီဂိမ်းကိုကစားပွဲစားပွဲအမျိုးမျိုးရှိတဲ့မေမြေအခြေစိုက်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံတွေမှာလည်းကစားနိုင်ပါတယ်။ Sic Bo ဂိမ်းများစွာကိုအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများတွင်လည်းရှာတွေ့နိုင်သေးသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းကိုတကယ့်လက်တွေ့နှင့်ကစားရန်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုပင်ရှိသည် ပုလဲ တစ်ဦးအတွက် တိုက်ရိုက်လွှလောင်းကစားရုံ.
Sic Bo ၏ဂိမ်းစည်းကမ်းများ
အခြားလောင်းကစားရုံများလိုပဲ, sic bo နှင့်သင်ပထမ ဦး ဆုံးသင်၏အလောင်းအစားဆုံးဖြတ်။ သင်လောင်းကြေးအတိအကျသည်ဤလောင်းကစား၏အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံနှင့်အမျိုးမျိုးသောကွဲပြားခြားနားသည်။ Sic bo သည်အမေရိကန်နှင့်ဆင်တူသည် ကင်လုပ်ခိုင်း, ဒါပေမယ့်အတော်လေးတူညီသည်မဟုတ်။ ဒီလောင်းကစားရုံမှာအန်စာတုံး (၃) ခုရှိတယ်။ မင်းရဲ့အလုပ်ကအန်စာတုံး (၃) ခု၏ရလဒ်ကိုသင်တတ်နိုင်သလောက်အကောင်းဆုံးခန့်မှန်းရန်ကြိုးစားရန်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သင်လောင်းကစားမည့်နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပါ။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ထိုအန်စာတုံးတစ်ခုကိုမှန်ကန်စွာကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်ဒီအန်စာတုံး ၂ ခုကိုခန့်မှန်းနိုင်သလား။ သို့သော်သင်လောင်းနိုင်သောအခြားရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အန်စာတုံး၏မျက်လုံးစုစုပေါင်း။ သို့မဟုတ်သင်က ၃ လုံးကိုခန့်မှန်းရန်ကံကောင်းသည်လား? ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ဟာအန်စာတုံး (သို့) ၃ ခုခန့်မှန်းဆသည်ဖြစ်စေ၊
Big / Small: ၁၁ မှ ၁၇ (အကြီး) သို့ ၄ မှ ၁၀ (အငယ်) ၁: ၁
၁ ယောက် - ၁: ၁
သုံးခွက်: 3: 1
နှစ် ဦး သေဆုံး: နှစ်ခုအန်စာတုံး၏ပေါင်းစပ်။ ၆: ၁
၉၊ ၁၀၊ ၁၁ သို့မဟုတ် ၁၂: ၆
၈း၁၃: ၈
၅း၁၆း၃၀။ ၁
နှစ်ချက် - တူညီတဲ့နံပါတ်နဲ့အန်စာတုံးနှစ်ခ။ ၁၁: ၁
သုံးဆမဆို - နံပါတ်တူအတူတူသုံးကြိမ်သေဆုံးခြင်း။ ၃၀: ၁
တိကျတဲ့သုံးဆ: သုံးကြိမ် 1, 2, 3, 4,5သို့မဟုတ် 6. 180: 1
ဆစ်ဘိုသည်အာရှကစားသမားများကြားအထူးသဖြင့်လူကြိုက်များသည်။ ဂိမ်းကစားခြင်းဝန်းကျင်နှင့်ဤလောင်းကစားရုံကိုအရှေ့တောင်အာရှမှပေါ်လွင်စေသောဂရပ်ဖစ်များမှလည်းမကြာခဏတွေ့မြင်နိုင်သည်။ Europa တွင်၊ ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများတွင်စစ်မှန်သော croupier ရှိသော sic bo ဇယားများကိုလည်းသင်တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်ဤဂိမ်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကစားနေဆဲဖြစ်သောမကာအိုကဲ့သို့သောလောင်းကစားရုံအတွေ့အကြုံကိုသင်ရှာဖွေနေပါသလား။ စိတ်မပူပါနဲ့တိုက်ရိုက်ကာစီနိုတစ်ခုမှာဆစ်ဘိုကစားနိုင်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ living ည့်ခန်းမှကစားနိုင်ပြီး croupier နှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်သည်။ သင်ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာတွင်ပြုလုပ်သောရွေးချယ်မှုများဖြစ်သောလောင်းကြေးနှင့်သင်လောင်းသည့်အန်စာတုံးများကိုကုန်သည်ရောင်းသူ၏ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်တွင်ချက်ချင်းမြင်နိုင်သည်။ ပြီးတော့ဖန်ခွက်တစ်လုံးသည်အန်စာတုံးကိုကျော်သွားသည်။ များသောအားဖြင့်ဒီအမိုးခုံးအောက်ရှိအန်စာတုံးများအားဂိမ်းကိုဖြစ်နိုင်သမျှတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းအတာအထိသိမ်းဆည်းရန်အလိုအလျောက်လှုပ်ခြင်းခံရသည်။ သင်ဤဂိမ်းကိုတိုက်ရိုက်ကာစီနိုတစ်ခုတွင်ကစားသောအခါသင်အမှန်တကယ်လောင်းကစားရုံတစ်ခု၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအမှန်တကယ်ခံစားရသည်။
ငွေပေးချေမှုရာခိုင်နှုန်းအမျိုးမျိုးဖြင့်စားပွဲတွင်သင်တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်သဖြင့်ခြားနားမှုများစွာရှိပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါတွေအားလုံးကအနိုင်ရတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ အနိုင်ရနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းနည်းလေ၊ တိကျတဲ့ Triple ကိုလောင်းခြင်းသည်ပညာရှိရာမကျပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အခွင့်အလမ်းအလွန်နည်းပါးသဖြင့်အန်စာတုံး ၃ ခုကိုမှန်ကန်တဲ့ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခြင်းမပြုမီသင်ခဏတာအလုပ်များနိုင်လိမ့်မည်။ သင်၏အခွင့်အလမ်းပိုမိုရရှိရန်ပိုမိုပျံ့နှံ့သည်ဆိုပါစို့။ ဥပမာ Big / Small တွင်လောင်းခြင်းသို့မဟုတ် ၂ အန်စာတုံးကိုခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်တွင်ဤသို့သောကြီးမားသောငွေပေးချေမှုမျိုးရှိမည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သင်၌အခွင့်အလမ်းပိုရနိုင်သည်။ ပိုမိုလေ့လာပါ sic bo မဟာဗျူဟာများ.
ပင်မစာမျက်နှာ » ဆစ်ဘို